Mohamed Salah oo ka hadlay saddexleydii uu ka dhaliyay kooxda Bournemouth – Gool FM
Mohamed Salah oo ka hadlay saddexleydii uu ka dhaliyay kooxda Bournemouth
Dajiye December 8, 2018
(Premier League) 08 Dis 2018. Mohamed Salah ayaa ka hadlay in rajooyinkiisa xili ciyaareedkan ee kooxda Liverpool ay tahay mid heer sare ah, isagoo sheegay in goolkii seddexaad uu ka dhaliyay Bournemouth uu ahaa kan ugu quruxda badnaa.
Kooxda Liverpool ayaa guul muhiim ah ka gaartay Bournemouth kaddib markii ay kaga adkaadeen 4-0.
Kulanka kadib ayaa kulanka kadib la hadlay shabakada “Sky Sports” kadib marka uu soo idlaaday kulanka wuxuuna yiri:
“Waxay ahayd hab wanaagsan ee si adag loogu soo laaban karo loolanka horyaalka Premier League, waxaana haatan hogaanka ku heynaa si ku meel gaar ah”.
“Inaan ilashanay shabaqeena waa arin wanaagsan, waxaan rajeyneynaa inaan sidaan sii wadno”.
“Goolkeygii saddexaad waa kan ugu quruxda badan aragtideyda, waxaan awooday inaan si dhib la’aan ah aan ku dhaliyo”.
“Hamigeygu waa mid heer sare ah, waxaana doonayaa inaan wax uun kula guuleysto Liverpool, qof kastana wuxuu iga sugayaa wax badan, balse sida ay ila tahay waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaan guuleysano kulamada aan ciyaareyno”.
Lionel Messi oo Qura ayaa Far dheer Maxamed Saalax oo inta kale isagaa ka sita
Safafka rasmiga ah ee Cagliari vs Roma